Monday January 15, 2018 - 10:33:28 in Wararka by Super Admin
Journaalka caanka ah ee la yiraahdo Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa soo daabacay warbixin uu cinwaan kaga dhigay "Qisooyinka aan la warinin ee Xasuuqii Ciidamada Kenya" taas oo lagu soo gudbinayey caddeymaha iyo marag-furka ay bixi
Journaalka caanka ah ee la yiraahdo Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa soo daabacay warbixin uu cinwaan kaga dhigay "Qisooyinka aan la warinin ee Xasuuqii Ciidamada Kenya" taas oo lagu soo gudbinayey caddeymaha iyo marag-furka ay bixiyeen askartii fara ku tiriska ahaa ee ka soo firxatay weerarkii Ceel-Cadde.
Askarta soo bad-baaday waxay sheegeen in ugu yaraan 210 askari oo Kenyaati ah lagu dilay weerarkii Ceel-cadde, islamarkaana tirada dhimashada uu ka badan yahay sida loo maleynayo ama dhinacyada qaar ay sheegayaan.
Warbixinta Wargeyska waxaa lagu bilaabay qisada askari lagu magacaabo Mark oo ka soo bad-baaday weerarkii aroornimo ee lagala dul dhacay xerada ciidamada Kenya kaga sugnaayeen deegaanka Ceel Cadde taariikhdu markii ay ku beegneed 15,1,2016.
Mark (ma ahan magaciisa saxda ah) wuxuu habeenkii jimcaha ee 15-kii January ee 2016-ka la hadlay saaxiibtiisa abaare sideed iyo 47 daqiiqo oo saqdhexe ah ka hor inta uusan ku laaban joodarigiisa hurdada, kuna sii fogaanin hurdada.
Waxaa markaas isaga dhufeyska kula jiray askari kale oo waardiyeka hayey goobta,Waxay filayeen in saacadaha soo socda ay kala badashaan shaqada laakiin taasi ma dhicin.
Ku dhawaad saacad uun kadib waxaa dhacay qarax aad u xoogan, kaas oo bilow u ahaa weerar lagu sifeeyey midkii ugu xumaa abid ee ay la kulanto dowlada Kenya taariikhda inta la xusuusto.
Mark saaxiibkiis wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyey ee ku soo baraarugay qaraxa, Madaxa ayuu kor usoo qaaday si uu kaga jawaabo weerarka laakiin ka hor inta uusan xabadii ugu horeysayba ridin, xabad ayaa wadnaha kaga dhacday, taasi oo sabab u noqotay in durbaba uu goobta ku naf baxo.
Markiiba waxaa jiifkiisa ka soo booday Mark iyadoo jirka dhintay ee saaxiibkiisa uu dhiig ka qulqulayo, wuxuuna bilaabay in uu rasaas furo ka hor inta uusan ka boodin siligga ku gedaaman saldhigga si uu meesha kaga baxsado.
Sidaan waxaa lagu yiri warbixinta uu soo daabacay Wargeyska la yiraahdo Standard ee fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana uu tilmaamay in tani ay ahayd cadeymihii ugu horeeyey ee laga helay bad-baade ka soo baxsaday weerarkii Ceel-cadde oo u waramay Wargeyska.
"waxaan ku jiray goobteyda jiifka, Ka hor weerarka waxaan sameeyey xoogaa wicitaan ah oo aan la sameeyey qof saaxiibkeyga ah,Taasi waa inta aan ka xusuusto markaas Waxaan arkay meydka saaxiibkey oo ku dhex dhacay dhufeyska Markii hore wuxuu ku soo kacay si uu u fiiriyo waxa meesha ka socda, waxay u maleeyeen in kaligii uu ku jiray difaaca” ayuu yiri Mark.
Askarigan soo bad-baaday wuxuu sheegay in xaaladu ay ahayd mid aad u daran, islamarkaana dagaalyahanadu ay ku soo wada xoormeen xerada, jugta qaraxyada iyo rasaastuna ay ahaayeen kuwa maqalka tiray dadkii xerada ku jiray.
Wuxuu sheegay in xerada ay ku jireen ugu yaraan 280 askari, wuxuuna tilmaamay in iska warqabka ciidanka iyo xiriirka dhexdooda ahba uu ugu dambeeyey markii uu dhacay qaraxii lagu furay weerarka.
"Ku Dhawaad 10 dagaalyahan ayaa joogtay ganteelka laga soo galo xerada. Suuragal ma ahayn in halkaas lagula dagaalamo oo goobta laga baxsado, saaxiibkeygana marhore ayuu tagay. Adiga hadaad hal toogan lahayd waxaa dhabarka kaaga imaanaya ilaa 20 qori oo kale. Runtii waxay ahayd saacad argagax badan, mana awoodin in aan dib u laabto” ayuu yiri.
Ilaa hadda ma jirto tiro rasmi ah oo dowlada Kenya ay sheegtay in looga dilay weerarkii Ceel-cadde, mana jirto wax jawaab ah oo ay ka bixisay qasaarihii halkaas lagu gaarsiiyey ciidankooda balse askarigan soo bad-baaday wuxuu aaminsan yahay in ugu yaraan 210 askari ay gaarayaan guud ahaan askarta lagu dilay weerarkii Ceelcadde iyo xitaa kuwa maxaabiis ahaanta u soo galay gacanta mujaahidiinta Al Shabaab.
QM ayaa horay u sheegtay in ugu yaraan 150 askari ay Kenya ku weysay weerarkaas, islamarkaana looga qabtay ugu yaraan 11 kale oo maxaabiis ah, halka madaxa Dowladda Federaalka Soomaaliya ee waqtigiisa dhamaadayna uu sheegay in ugu yaraan 180 ilaa 200 oo askari lagu dilay weerarkaas.
Mark oo ah Askariga ka soo bad-baaday weerarkan wuxuu shaki geliyaan dhamaan sheegashooyinka soo baxaya ee ku saabsan khasaaraha dhimasho ee weerarka, wuxuuna aaminsan yahay in ugu yaraan 210 askari lagu dilay weerarkaas.
Askarigan wuxuu ka mid ahaa ilaa sideed askari oo kaliya oo ka soo bad-baaday weerarkaas, iyagoo dhaawac la’aan ah sida uu tilmaamayo wargeyska.
Waxaa sidoo kale jira ugu yaraan 15 askari oo kale oo soo bad-baaday iyagoo dhaawacyo kala duwan qaba.
Askarta soo bad-baaday waxay sheegeen in ay soo mareen xaalado adag oo aanan la suureysan Karin.
Mark wuxuu tilmaamay in isaga iyo askari kale oo saaxiibkiisa ah ay ku soo baxsadeen si halis ah, ayna ka soo wada boodeen siligga ku gedaaman difaaca markii uu dagaalku sii adkaaday.
Wuxuu sheegay in saddex maalin oo xiriir ah ay soo lugeynayeen iyagoo aanan helin il-biriqsi hurdo ah iyo dhibic biyo ah.
Weerarkan oo dowlada Kenya u soo jiiday guuldaradii ugu weyneed abid oo ay la kulmaan taariikhda inta la xuruusto ayaa weli ka go’i la’ laabta soo duulayaasha Kenya, waxaana hal sano kadib weerarkaas ay xusayaan wiilashii ay ku waayeen weerarkaasi, sidoo kalena dowladooda ka dalbanaya in ay soo bandhigto xaqiiqda wixii dhacay.